မသက်ဇင်: နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက်နှင့် အရိမဒ္ဒန ( ၁၂ )
နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက်နှင့် အရိမဒ္ဒန ( ၁၂ )
ထီးလှိုင်ရှင်၏ အရိမဒ္ဒနာပူရ နံနက်ခင်း
သူ နှင့်ကျမ နံနက် စောစော သီရိပစ္စယာ လမ်းမ ကြီး အတိုင်း လျှောက်လာခဲ့ ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ နံနက် ခင်း ဖြစ် ၍ မြူ အနည်းငယ် ဆိုင်းနေသည်။ ထနောင်းပင်ကြား မှ ကူချွဲ နေသည့် ချိုးကူသံ နှင့် အတူ ပတ်ဝန်းကျင်က သာယာ လှသည်။ ချိုးကူသံနှင့် ခါတွန်သံမှ တပါး တိတ်ဆိတ် လျက်ရှိသည်။ သဗ္ဗညုဘုရား ပရဝုဏ်မှ ဖြတ်ကာ အာနန္ဒာဆီ သို့ ကျမ တို့ ဆက်လျှောက် သည်။ နံနက် စောစော ဖြစ်၍ လူသူကင်းမဲ့နေသည်။ လေ က အေးမြ လန်းဆန်း သည်။ ထီးလှိုင်ရှင်၏ အရိမဒ္ဒနာပူရ နံနက်ခင်း တွင် လတ်ဆတ် အေးမြသည့် လေကို ရှူရှိုက် ရင်း ပုဂံ ပျက်သုဉ်း ရခြင်း အကြောင်းကို သူ က လမ်းလျှောက်ရင်း စကား တ ပြော ပြော နှင့် ရှင်းပြ သွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို စတင် သိမ်းသွင်း စည်းရုံး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အနော်ရထာမင်း နန်းတက်ချိန် သက္ကရာဇ် ၁၀၄၄ ခု နှစ်က နေ နောက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံ စည်းလုံး ညီ ညွတ်မှု ပျက်ပြားပြီး ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နရသီဟပတေ့ မင်း နန်းသက်အဆုံး သက္ကရာဇ် ၁၂၈၈ ခုနှစ်အထိ ပုဂံခေတ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်း ဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ခန့် ကြာ ခဲ့တယ်။
အာရှ အရှေ့ တောင်ပိုင်းမှာ သူ့ ခေတ်နဲ့ သူ့ အခါ ထင်ရှား ကြီးကျယ် ခဲ့တဲ့ ပုဂံ မင်းဆက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ပျက်ပြားသွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေ ကို သမိုင်း ပညာရှင် တွေနဲ့ သုတေသီ တွေက အယူ အဆ အမျိုးမျိုး ရေးသားခဲ့ ကြတယ်။ မြန်မာ ရာဇဝင် တွေ ကတော့ တာတာ တရုတ်တွေ တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးလို့ ပျက် စီးသွားရတယ်လို့ ရေးသား ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသား သမိုင်း ပညာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါဗ့် ၊ ဟာဗီ ၊ ပန်း ၊ ဟောလ် ၊ တို့ ကတော့ ရှမ်းလူမျိုးတို့ ရဲ့လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် လို့ ယူဆကြတယ်။
မြန်မာရာဇဝင် ဆရာကြီး တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသား သမိုင်း ပညာ ရှင် တွေ ရဲ့ ရေးသား ချက်တွေကို လုံးဝ ငြင်းပယ် လို့ မရ ပေမယ့် ရှမ်းလူမျိုး များနဲ့ တာတာတရုတ်တွေ လှုပ်ရှားမှု မတိုင်ခင် ကတည်း က မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ် စွမ်း အား လျော့ပါးလာပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ကာကွယ်ရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျက်ပြား ဆုတ်ယုတ် လာနေတာ က အ ခြေ ခံ အကြောင်းရင်းပါပဲ မ ရယ်
သူ စကားပြောရင်း လမ်းပေါ်မှ ကျောက်ခဲလေး တလုံး အား အမှတ် တမဲ့ ကန်ကျောက် လိုက် သည်ကို ကျမ သ တိထား လိုက်မိသည်။ သူ့ အတွင်း သန္တာန် မှာ မကျေနပ်စရာ လျှို့ဝှက် ခို အောင်း နေသည့် အရာ တခုခု ရှိနေ သည် လား။ ထိုအရာ အား ကျမ မစူးစမ်းလိုပါ ၊ သူ ရေးနေ သည့် ကဗျာများထံ သူ့ စိတ်ကို ရောက်သွား စေလို၍ ကျမ မေးခွန်းတွေ ထုတ်နေ လိုက် မိသည်။ သူ က ပြောသည် မ ကို ရင်ခုန်ပြီး ကျွန်တော် ကဗျာတွေ အများကြီး စပ်မိပါတယ် တဲ့ ၊ ဘယ်လိုကဗျာတွေလဲ ဟု ကျမ မေးသောအခါ လေထဲမှ လွင့်လာတဲ့ နှင်းဆီ ပွင့် ဖတ်လေး ဟာ ကျွန်တော့် ရင်ပတ် နားရောက် တော့ ရပ်သွားတယ် ၊ တယုတယ လက်ခုပ် လေးထဲ ထည့်လိုက် တော့ လိပ်ပြာ လေးဖြစ်သွားတယ် ၊ ကျွန်တော် လိုက်ဖမ်းတော့ လိပ်ပြာလေးက မ ဆံပင်ရှည် ထဲ ပြေးဝင် ပုန်း နေတယ် ၊ အဲလို ကဗျာမျိုးတွေ စပ်တာပေါ့တဲ့။ သူ တခါ တရံ စကားပြောနေရာမှ ကျမအား ငေးမော ကြည့် နေ တတ်သည်ကို ကျမ မသိ ကျိုးကျွန် ပြုထားလိုက် သည်။ ရံဖန်ရံခါ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးချင်းဆုံ လျှင်တော့ နှစ်ယောက်လုံး၏ အပြုံးများ လမ်းခုလတ်တွင် တိုက်မိပြီး သူက စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းပစ်တတ်သကဲ့သို့ ကျမသည် လည်း ခရားရေလွတ် တတွတ်တွတ် မေး ဖြစ်သွားသည်။
ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော် အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ပြောရရင် သက္ကရာဇ် ၁၅၅၀ ခန့် ကနေ ၁၇၅၀ ခန့် အ ထိ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကြာမြင့် ပြီး ထင် ရှားတဲ့ မြန်မာ မင်းဆက် ၁၃ဆက် စိုးစံ ခဲ့ တယ် ၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော် စတင် ထူထောင်တဲ့ ကာလကို အနောက် နိုင်ငံ သမိုင်း သုတေသီ အချို့က မြန်မာ လူမျိုးတွေ အရှိန်အဟုန် ပြင်းထန် ကြီး မားစွာ ပေါက် ကွဲသော ကာလလို့ ရေးသား ခဲ့ ကြ တယ်။ စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ဒေသ ကို အခြေခံပြီး အကွဲကွဲ အပြားပြား ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒလကြမ်း စည်းရုံး သိမ်းသွင်းပြီး မဏိပူရ ၊ ကိုး ရှမ်း ပြည် ၊ လင်းဇင်း၊ ဇင်းမယ် ၊ ယိုးဒယားနယ်လွန်ရပ်ခြား နိုင်ငံများကိုပါ တိုးချဲ့ သိမ်းပိုက်ခြင်း ပြုတော့ မြန်မာ လူမျိုးများရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များဟာ သမိုင်း တလျှောက်မှာ ကြီးမားပြင်း ထန်ခဲ့တယ်။
ဗင်းနစ်စ်မြို့က ကုန်သည်ကြီးတွေ ရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း စာအုပ်တွေမှာ ရေးသား ဖေါ်ပြထား တာတွေ ကတော့ အဲဒီ အချိန် ကာလ တုံးက မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဟာ အကျယ် ဝန်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဘုရင့်နောင်ရဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်ကြီးဟာ တသိန်း နီးပါး ခန့် လောက် ရှိတယ်တဲ့ ဟံသာဝတီ မှာ တည်ထောင် ထားတဲ့ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ နန်းတော်ကြီးဟာ မြို့ကြီးတမြို့ လောက် ကြီးကျယ် ခန်းနားပြီး တံခါးပေါင်း ၂၀ လောက် ရှိတယ်တဲ့ သူတို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ တုံးက တွေ့မြင် ခဲ့ရတာကို မှတ်တမ်း ပြုထားတာ တွေ့ရတယ်။
အဲဒီ ကာလ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ အခြေ အနေ ကိုလေ့ လာကြည့် တဲ့အခါ ၊ တရုတ်ပြည်မှာ ယွမ်းခေါ် ခန်မင်းဆက် ကို တရုတ်ပြည်သူများက ထကြွ ပုန်ကန်ပြီး မဟာ တံ တိုင်း ကြီး အပြင်ကို မောင်း ထုတ်လိုက်ကြပြီး ထင်ရှားတဲ့ မင် မင်း ဆက်ကို ထူထောင်လိုက်တယ်။ အင်ဒို ချိုင်းနား ဒေသမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ကမ္ဗောဒီးယား နိုင်ငံ ပျက်စီး သွား ပြီး အာနံ ၊ တုံကင် ၊ လင်းဇင်း ၊ ဇင်း မယ် ၊ သောက္ကတဲ ၊ ကမ္မပိုက် နဲ့ ယိုးဒယား စတဲ့ အာဏာပိုင် နိုင်ငံ က လေး တွေ ထီးပြိုင် နန်းပြိုင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့တယ်။
အာရှ့တောင်ပိုင်း ကျွန်းဆွယ် တဝိုက်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သီရိဝိဇယ ၊ မဇ္ဈပဟီ ၊ မာလာယု တို့ ဟာ သူတို့ အချင်း ချင်း တိုက်ခိုက် နေကြ တယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမြောက် ဘက် မှာ မဂိုလ် မင်းဆက် တွေ စိုးစံနေတယ်။ တောင်ဘက် မှာ ဝိဇယနာဂရ နိုင်ငံ တော်ကြီး ကို ဟိန္ဒ ဘုရင် များစိုးစံနေတယ်။ သီဟို နိုင်ငံကတော့ သီးခြား ကင်းလွတ် နေပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ နိုင်ငံ အဖြစ် တည်ရှိ နေတယ်။
ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံကို စည်းရုံးတည်ထောင် ခဲ့တဲ့ ဘုရင့် နောင် ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ မြို့ တော်ကို မွန်တို့ရဲ့ မြို့ တော် ဖြစ်တဲ့ ဟံသာဝတီမှာ ဆက်ထား ပြီး ရာဇဓိရာဇ် အရေး တော်ပုံကို ရေးသားပြုစု ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဘုရင့် နောင်ရဲ့ ၀န်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗညားဒလ ဟာ မွန်လူမျိုး အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ ရာဇ၀င် တွေမှာ ရေးသား ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရတယ်။ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဓိက ကုန် ထုတ်လုပ် ငန်း ဖြစ်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးချဲ့ပြီး လက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဖောက် ကား ရောင်းဝယ် မှု တွေ ဇင်းမယ်နဲ့ မဏိပူရ နယ်က ယွန်းထည်နဲ့ ယက်ကန်း လုပ်ငန်းတွေ ဖန်ချက်လုပ်ငန်းတွေကို တိုးချဲ့ ထူ ထောင် ခဲ့ တယ်လို့ မြန်မာ ရာဇ၀င်တွေမှာ ရေးသား ထားတာတွေ့ ရတယ်။
ဟံသာဝတ၊ီ မုတ္တမ၊သံလျင်၊ ဒလနှင့် ပုသိမ်မြို့တွေဟာ နိုင်ငံခြား ရောင်းဝယ်ရေး ဆိပ် ကမ်း မြို့ကြီးတွေ ဖြစ် ကြပြီး ဥရောပ တိုက်သားတွေနဲ့ အိန္ဒိယကုန်တွေ ဖောက် ကား ရောင်းဝယ် နေတာကို ၁၅၆၉ ခုနှစ်က ဟံသာ ၀တီကို ကုန်ရောင်း ကုန် ၀ယ် အတွက် ရောက်ရှိ ခဲ့တဲ့ အီတလီပြည်က ကုန်သည်ကြီး ဖရက် ဒရစ် က သူ့ ရဲ့ ခရီးသွား မှတ် တမ်းမှာ ရေးသား ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ပြည်တွင်း ဖောက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး အတွက် ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ပြီး စနစ်တကျ ရှိဘို့ အတွက် ဘုရင့် နောင် ဟာ နိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံးမှာ အလေး၊ တင်း တောင်း၊ ကျပ်၊ မူး၊ မတ် ၊ တွေကို တညီ တညွတ်တည်း ဖြစ်ဘို့ စီမံခန့်ခွဲ ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာရာဇ၀င်တွေမှာ ရေး သား ထား တာတွေ့ရတယ်။
ဒုတိယ မြန်မာ နိုင်ငံကို ပြန်လည်ထူထောင်ကာစ အချိန်က ကျယ်ဝန်းပြီး ရှမ်း မြန်မာ မွန် ကရင် ကချင်နှင့် ချင်းစ တဲ့ လူမျိုးစုတွေ ပျံ့နှံ့နေထိုင်နေကြတဲ့ ဒေသ ကြီး တစ်ခုကို စည်း စည်းလုံးလုံးနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိဘို့ ထိန်းသိမ်း အုပ်ချုပ်ခြင်း အလုပ်နဲ့ ကာကွယ် စောင့် ရှောက် ရတဲ့ အလုပ်ဟာ ကြီးလေး ခက်ခဲတဲ့ တာဝန် တွေဖြစ် ခဲ့ မှာပါပဲ။
အဲဒီအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကွဲကွဲ အပြားပြားဖြစ် နေကြတဲ့ လူမျိုးစု တွေကို သူတို့ စုဝေး နေထိုင်ရာ ဒေသ အလိုက် ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲတွေ ခန့်ခွဲအုပ်ချုပ် ရတာတွေက အခက် အခဲ မရှိပေမယ့် ဝေးလံတဲ့ ဇင်း မယ် နဲ့ ယိုးဒယားနိုင်ငံကို ချဲ့ထွင် သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ခြင်း ပြု ရတာကတော့ ကြီးလေးတဲ့ တာဝန် နဲ့ စရိတ်စက တွေ ရှိ မှာပဲလေ။ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဇင်းမယ်နဲ့ ယိုးဒယားစစ်ပွဲတွေ အတွက် ထမ်းဆောင်ကြ ရတဲ့ ပြည် သူတွေ ဟာ ဆိုး ဆိုး ရွား ရွား သည်းညည်း မခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိတယ်။
သက္ကရာဇ် ၁၅၆၄ ခုနှစ် က ဘုရင့်နောင် ယိုးဒယားကို ချီတက် တိုက်ခိုက်တုံး ဟံသာဝတီ နန်းတော်ကြီးကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ ပုန်ကန်ထကြွမှုကို မြန်မာ ရာဇ၀င် တွေမှာ အတိ အလင်း ဖွင့်ဟ ၀န်ခံ ထားတယ်။ ဒုတိယ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကို ထူ ထောင်ခြင်း ပြုတဲ့ တပင်ရွေထီး ( ၁၅၃၁-၅၀) နဲ့ ဘုရင့် နောင် (၁၅၅၁ မှ ၁၅၈၁) တို့ ရဲ့ နန်း သက် နှစ်ပေါင်း၅၀ ခန့်အတွင်း မှာ အဆ မတန် ကြီးလေးတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ကာ ကွယ်ရေး စရိတ် တွေကို ထမ်း ဆောင် ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်သူ တွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ အခြေအနေ တွေကို ခန့် မှန်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ ပုဂံမင်းဆက် ဘုရင်တွေရဲ့ အစဉ် အလာကို ဆက် ခံပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ တိုးပွား စည်ပင်အောင် တိုးချဲ့ ဆောင် ရွက်တာတွေ လုပ် ခဲ့ပြီး။ ယဇ်နတ် ပူဇော် တာတွေနဲ့ ခေတ် နောက်ကျတဲ့ တောင်တန်းဒေသတွေမှာ အကြီး အ ကဲ တစ်ဦးသေဆုံးတာနဲ့ သားမယားတွေ ၊ ကျေး ကျွန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မြှုပ် နှံကြတဲ့ ရှေး ဟောင်း ဓလေ့တွေကို ပိတ်ပင်ပြီး ၊ ဓမ္မသတ်တွေ ကို စု ဆောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း တွေ ၊ ပြု လုပ် ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ ရာဇ၀င်တွေမှာ ရေးသားထားတာ ပေါ့ မ ရယ်။
Posted by မသက်ဇင် at 9:14 AM
မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ဟံသာဝတီနန်းတော်ကို ပြည်သူဖြစ်တဲ့ လယ်သမားတွေက မီးရှို့တယ်။
ကိုယ်ကျင့်သီလ နဲ့ လောကပါလတရား တွေကို မဖြည့်ဆီးပဲ လူသားအကျိုးပြု ခေါင်းဆောင် တွေ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပြောတော့ ရယ်ကြတယ်အစ်မရယ်။
ကိုင်း ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အထူးထူးအထွေထွေသော အရည်အချင်းအားလုံးထဲက ပြည်သူလူထုက အနှစ်သက်ဆုံးက ရိုးသားမှုရယ်ပါလို့ သက်သေနဲ့တကွပြတော့ အရယ်တိတ်သွားတယ်။
အစ်မရေ ဒီလို အခန်းဆက်ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရတာ ဘဝတစ်ခုကိုဘေးကနေ live ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲ ။ ရင်ခုန်ဖို့လဲကောင်းတယ် ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လဲကောင်းတယ် ။
ကျွန်တော်လဲ အခန်းဆက်တအားရေးချင်ပါတယ်အစ်မ အားကျလို့ ။ ဆက်မျှော်နေပါမယ် ။
အမရေ .. အပိုင်း (၁၂)ကို ဖတ်သွားပြီဗျ...တစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း ဖတ်ဖို့ မျှော်နေရတယ် အမရေ ..ဗဟုသုတတွေများစွာ ရရှိပါတယ် ..သမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားပေမယ့် မလေ့လာနိုင်ခဲ့တော့ အခု အမ ရေးတာကို ဖတ်ပြီး မှတ်သားရပါတယ် ..ဒီ အမ ရေးတဲ့ နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက် နှင့် အရိမဒ္ဒန အကြောင်းကို ကျွန်တော် Word ဖိုင်တွေနဲ့ Save ထားပါတယ် ..လက်ရှိ အပိုင်း (၁၂) အထိပေါ့..ဆက်လက်ရေးသားမှုများကိုလဲ စောင့်မျှော်နေလျက်ပါ အမ ...
သိပ်ကောင်းတဲ့ အခန်းဆက်ကလေးတွေပါ။ အခန်းဆက်ပို့စ်ကလေးတွေကို ဖတ်တိုင်း မြန်မြန်အဆုံးသတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမဲ့ အခု အမရေးထားတဲ့ အခန်းဆက်ကလေးတွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမသွားစေချင်ဘူး။ ဖတ်ရတာ အရမ်းဗဟုသုတရလို့။
ရောက်ပါတယ် အမရေ....ရာဇ၀င်တွေကို..တခုတ်တရ..မဖတ်ဖြစ်ဘူး.. နည်းနည်းချင်း.. ပုံပြောသလိုလေး..ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပဲ...
လာဖတ်သွားပါတယ် မသက်ဇင်၊ သမိုင်းတွေကလည်း ကျယ်ပြန့်လာပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကတော့ သိပ်ခရီးမရောက်သေးသလိုပဲ။ ဘုရင့်နောင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ၁၆ ရာစု မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အင်အားအကြီးဆုံး ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်က သင်ရတုန်းက သိပ်ကိုဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သိမ်းသွင်းတဲ့အလုပ်ကို ကိုယ့်လူမျိုးလုပ်တာကိုတော့ ဂုဏ်ယူခဲ့သလောက် သူများလူမျိုးလုပ်တာကိုကျတော့ သိပ်ကိုရွံရှာမုန်းတီးခဲ့တာကို သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ထိုင်ကိုရောက်တဲ့အချိန် ယိုးဒယားလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေကို သိပ်မုန်းတာကို တအံ့တသြတွေ့ရတော့မှ ကိုယ်ချင်းစာလို့တတ်သွားတယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ကို နယ်ချဲ့သူတွေကို ဒီလိုပဲ မုန်းခဲ့တာကိုး။ အခုတော့ အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း သိပ်ဂုဏ်မယူတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကို ကျွန်လာပြုသွားတဲ့အပေါ်မှာလည်း အရင်ကလောက် အာဂါတ မရှိတော့ပါဘူး။ သူ့ခေတ်နဲ့သူ့ခါ သူတို့အလုပ်ကို သူတို့လုပ်ကြသလို ကိုယ့်ခေတ်မှာလည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရမယ်လို့ပဲ နားလည်လိုက်တော့တယ်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပုဂံမင်းဆက် ဘုရင်တွေရဲ့ အစဉ် အလာကို ဆက် ခံပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ တိုးပွား စည်ပင်အောင် တိုးချဲ့ ဆောင် ရွက်တာတွေ လုပ် ခဲ့ပြီး။ ယဇ်နတ် ပူဇော် တာတွေနဲ့ ခေတ် နောက်ကျတဲ့ တောင်တန်းဒေသတွေမှာ အကြီး အ ကဲ တစ်ဦးသေဆုံးတာနဲ့ သားမယားတွေ ၊ ကျေး ကျွန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မြှုပ် နှံကြတဲ့ ရှေး ဟောင်းဓလေ့တွေကို ပိတ်ပင်ပြီး ၊ ဓမ္မသတ်တွေ ကို စု ဆောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း တွေ ၊ ပြု လုပ် ခဲ့တယ်လို့ ........
ဒီအကြောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ခုခေတ်မှာ ကျွန်ဖြစ်နေရတာကမှ နဲနဲ တော်သေးရဲ့ လို့စိတ်ဖြေလိုက်နိုင်တယ် မသက်ဇင်ရေ ။ ဒီတော့ အခြေအနေလေးပေးတုံး ဆက်လက် ကျွန်ခံ နေလိုက်ပါအုံးမယ် ။ အကြီးအကဲတွေသေတာ မသေတာ ကတော့ သူတို့ စရိတ်နဲ့ သူတို့သွားကြလိမ့်မပေါ့ နော် ။ဆွေးမြေ့ စရာ ဇာတ်လမ်းလေး ရဲ့ နောက်ဆုံး အဖြေကိုလည်း သိချင်နေမိပေမဲ့နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးကိုလည်း ဆက်လက် ခံစားနေမိချင်ပါတယ် ။
မသက်ဇင် ရေ အမြဲတမ်း အားပေးလျှက်ပါ ။ ချမ်းမြေ့ ပါစေ ။
အစ်မသက်ဇင်ရေ။ website တစ်ခုထဲကရတာ ပုဂံနိုင် ငံတော်ရဲ့ အကျယ်အ၀န်း မြေပုံပါလို့။ အစ်မစိတ် ၀င်စားမယ်ထင်လို့။
ဟုတ်ကဲ့မမ စာလည်းကျက်ပါတယ်...။ အခုတော့ သတိရနေလို့ နဲနဲ ဟိုရေးဒီရေးတော့ လုပ်နေပါသည်။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပေါ့နော် မမရေ... ကျေးဇူးပဲနော် စာကျက်ဖို့ သတိပေးတဲ့ အတွက်ပေါ့။
ရေးသမျှ ပုဂံအကြောင်းတွေ စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်မယ်မဟုတ်လား၊ ကြိုနေမယ်၊ သိမ်းထားချင်တယ်၊ ဖတ်ချင်တယ်၊
အစ်မတော်ရေ အခန်းဆက်လေးတွေနဲ. ဖတ်ရတာ Good တယ်ဗျာ၊ ဆက်ရေးပါဦး၊
အခန်းဆက်ဆောင်းပါးဖတ်ရတာ ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်ပေမယ့် ကောင်းပါတယ် စာရေးကောင်းတယ် အစ်မ အားပေးလျှက်ပါ :)
အခန်းဆက် ခရီးသွားဆောင်းပါး ကို မပျက်မကွက် လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်စွာ ဖတ်သွားပါတယ်။ မရောက်ဖြစ်တဲ့ ရက်တွေ အတွက်ပါ နှုတ်ဆက် ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေ ရေးသားနိုင်ပါစေ.
11:23 PM PDT
“လေထဲမှ လွင့်လာတဲ့ နှင်းဆီ ပွင့် ဖတ်လေး ဟာ ကျွန်တော့် ရင်ပတ် နားရောက် တော့ ရပ်သွားတယ် ၊ တယုတယ လက်ခုပ် လေးထဲ ထည့်လိုက် တော့ လိပ်ပြာ လေးဖြစ်သွားတယ် ၊ ကျွန်တော် လိုက်ဖမ်းတော့ လိပ်ပြာလေးက မ ဆံပင်ရှည် ထဲ ပြေးဝင် ပုန်း နေတယ် ၊ အဲလို ကဗျာမျိုးတွေ စပ်တာပေါ့တဲ့။ သူ တခါ တရံ စကားပြောနေရာမှ ကျမအား ငေးမော ကြည့် နေ တတ်သည်ကို ကျမ မသိ ကျိုးကျွန် ပြုထားလိုက် သည်။ ရံဖန်ရံခါ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးချင်းဆုံ လျှင်တော့ နှစ်ယောက်လုံး၏ အပြုံးများ လမ်းခုလတ်တွင် တိုက်မိပြီး သူက စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းပစ်တတ်သကဲ့သို့ ကျမသည် လည်း ခရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် မေး ဖြစ်သွားသည်။”
ဒီအပိုဒ်လေးက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခုန်သံလေးတွေကြားရတယ် ..:P
“ဟံသာဝတီ နန်းတော်ကြီးကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ ပုန်ကန်ထကြွမှု”
အစ်မရေ..အဲဒီ အကြောင်းလေးကို သေချာမသိလို့ ထပ်ရေးပြပေးရင်ကောင်းမယ်နော်..။ဟံသာဝတီ နန်းတော်ကြီးကို မီးရှို့တဲ့အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ ။
ယိုးဒယားတွေလည်း မြန်မာပြည်လာရင် ပဲခူးကို လာလာလေ့လာနေတာ တွေ့ဖူးလို့ပါ။
လင်းဒီပပြောသွားသလို ဟံသာဝတီနန်းတော်အကြောင်းကိုလဲ သေသေချာချာလေးသိချင်ပါတယ်..အစ်မ...
သုတ ရသ မျှမျှတတပါဝင်တဲ့ အဖိုးတန်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တောင့်တလျှက်
သူ က ပြောသည် မ ကို ရင်ခုန်ပြီး ကျွန်တော် ကဗျာတွေ အများကြီး စပ်မိပါတယ် တဲ့ ၊ ဘယ်လိုကဗျာတွေလဲ ဟု ကျမ မေးသောအခါ လေထဲမှ လွင့်လာတဲ့ နှင်းဆီ ပွင့် ဖတ်လေး ဟာ ကျွန်တော့် ရင်ပတ် နားရောက် တော့ ရပ်သွားတယ် ၊ တယုတယ လက်ခုပ် လေးထဲ ထည့်လိုက် တော့ လိပ်ပြာ လေးဖြစ်သွားတယ် ၊ ကျွန်တော် လိုက်ဖမ်းတော့ လိပ်ပြာလေးက မ ဆံပင်ရှည် ထဲ ပြေးဝင် ပုန်း နေတယ် ၊ အဲလို ကဗျာမျိုးတွေ စပ်တာပေါ့တဲ့။ သူ တခါ တရံ စကားပြောနေရာမှ ကျမအား ငေးမော ကြည့် နေ တတ်သည်ကို ကျမ မသိ ကျိုးကျွန် ပြုထားလိုက် သည်။ ရံဖန်ရံခါ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးချင်းဆုံ လျှင်တော့ နှစ်ယောက်လုံး၏ အပြုံးများ လမ်းခုလတ်တွင် တိုက်မိပြီး သူက စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းပစ်တတ်သကဲ့သို့ ကျမသည် လည်း ခရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် မေး ဖြစ်သွားသည်။
အစ်မစာတွေဖတ်ရတာ အရမ်းအကျိုးရှိတာပဲ ..
နောက်ဆက်ရန်တွေကို စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်း)
ဟံသာဝတီ နန်းတော်က တော်တော်ခန်းနားတယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ဖူးတယ် အစ်မ ... တံခါးတွေဆိုတာ အကြီးကြီးတွေ ... ရွှေရောင်တွေတောင် တဖျက်ဖျက်လတ်နေတယ်ဆိုလား ... ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒီလိုခန်းနားတဲ့ မြန်မာ့နန်းတော် တစ်ခု ပျောက်ပျက်သွားတာ တော်တော်နှမျောဖို့ ကောင်းလွန်းတယ်။ မန္တလေးက ရတနာပုံ မြို့ရိုးကြီးတောင် ဒီလောက် တန်ဖိုးထားစရာ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်နေရင် ... ဒီ ဟံသာဝတီ နန်းတော်သာ ကျန်နေရစ်ခဲ့လို့ကတော့ .... ထားပါတော့လေ ... ဒါနဲ့ စကားမစပ် သူဘယ်တော့ လိပ်ပြာလေးကို ဖမ်းမှာလဲ ... ဖမ်းဖို့ လက်လှမ်းလိုက်မိတဲ့ အချိန်မှ ထွက်ပြေးသွားမှာလည်း စိုးမိပါရဲ့ ... မြန်မြန်သာဖမ်းလိုက်ပါတော့လို့ ... :D
ဒါဟာ ပုဂံကိုချယ်တဲ့ ဆေးရောင်စုံ စုတ်ချက်စုံတဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပန်းချီတစ်ချပ်ပဲလေ။
5:40 AM PDT
ဖတ်ရင်း၊ စဉ်းစားရင်း၊ မှတ်သားရင်းနဲ့ တခေါက်ဖတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်လို့ အထပ်ထပ်ဖတ်နေရတယ် မရယ်၊ ဟံသာဝတီနန်းတော်က ဒီလိုပျက်ခဲ့တယ်လား။
အီးမေးလိပ်စာ သပ်သပ်မတွေ့လို့ ဒီမှာဘဲ ရေးလိုက်တယ်။
ဒီအောက်ကစာကို အခုဘဲ ဆရာ့ဆီရောက်လာတယ်။ ဆရာတို့ဆရာဝန်တွေ စုရေးနေကြတဲ့ အီးမေးအုပ်စုကနေ လာတာပါ။
ဆရာဝန်တွေကလေ၊ ဆေးကုတဲ့အလုပ်ကလွဲရင် တခြားဟာလုပ်ကြတဲ့လူတွေ အများကြီးဘဲ။ တချို့က ကဗျာ-စာ။ တချို့က တေးဂီတ၊ ဆရာ့လိုလူက နိုင်ငံရေး။
စိုင်းလိတ် ၆၀ ပြည့်တော့မယ်ဆိုတာလဲ ပြောနေကြတာရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဆရာတို့က စိုင်းလိတ်ပဲခေါ်တယ်။ ဆေးကျောင်း စတက်တော့ သူက ပဌမနှစ်၊ ဆရာက ဒုတိယနှစ် မန္ထလေး၊ ဖါးသာလဖုန်းအဆောင်မှာ တကုတင်ကျော် နေခဲ့ရတာ။ သူက ပုလွေလေးတချောင်းနဲ့ ဂီတာ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးနဲ့ပေါ့။
ဟိုတနေ့ကဆို ဆရာဝန်တယောက်က မိုးမခမှာ မဟာဂီတအကြောင်း ရေးသေးတယ်။ သူရေးမှဘဲ (မန်းတောင်ရိပ်ခို သီချင်းကို ဆရာကြီးသုံးဦးက တပိုဒ်စီ ရေးခဲ့ကြတာပါ။ ဆရာကြီး အေဝမ်းဆရာညှာ ခေါ် မန္တလာညှာ၊ ဆရာကြီး မြို့မငြိမ်း၊ ဆရာကြီး ဦးဘသိန်း(မန္တလေး) တို့ သုံးဦးဖြစ်ပါတယ်။)ဆိုတာ သိတော့တယ်။ ရေးတဲ့ဆရာဝန်က ကျောင်မှာတုံးတော့ ပုလွေတချောင်းနဲ့တော့ တွေ့နေရသူပေါ့။
အခုသမိုင်းစာကို တကူးတကဘာသာပြန်ပြီး အချင်းချင်းအဖတ်ခိုင်းတကလဲ ဆရာဝန်ဘဲ။ စီနီယာပေါ့။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူ၊ မသက်ဇင်ဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သမိုင်းဆိုတာနဲ့ အမှတ်ရတာနဲ့ ပို့တာပါ။
Where have the Pyu gone to?
(Translation in gist by Dr Maung Maung Nyo)
I am always intrigued with the Pyu, an early Tibeto-Burman tribe that entered Burma sine the beginning of the Burmese History, since my high school days. We read in the Burmese History books that the three big tribes entered Burma to populate it namely Pyu, Kamyan and Thet. The Pyu became Burman later, Kamyam became Arakanese and Thet became Chin. However, Profesor Luce and modern Burmese historians write that the Pyu disappeared completely by about AD 9th Century as their city probably Hanlin or Halin was destroyed in AD 832 by the Nan Chao forces. However, the Burmese traditionally say that the Pyu became Bamar and the Bagan of Pagan was established by the Pyu of the Sri Ksetra (Prome or Pyi) when the latter was destroyed by the Nga Sagaw Army. Sayagyi Luce hypothesized that the Nga Sagaw Army may belong to the Sagaw Karen of today.
And I cannot believe thatawhole tribe of Pyu disappeared because there are no longer Pyu writings and Pyu speaking people. It may be due to these people no longer using their writing alphabets and language.
Look at the countries of the English speaking people nowadays: In USA the native Indian's languages have disappeared tribe by tribe. So is the Aborigine's language in Australia and Maori language in New Zealand. I also know that in Malaysia changing the script from the Urdu script to Roman script made Malay no longer able to read or write their old Malay scripts. By not using these old Malay script does not mean the Malays have disappear! The Malay people are still here in Malaysia. So is the change in Vietnam when the script as changed from the old Vietnamese pictograms to the present Roman script. This could have happen to the Pyu of Burma as they are absorbed into Bamar or Burman or they became Burman. This view is being put forward by Dr Than Tun, an eminent Burmese historian. Enjoy.
Where have the Pyu disappeared?
This is the title of the book written by the late Sayagyi Dr Than Tun, the celebrated historian of Burma. It was published in July 2006.
Dr Than Tun writes:
1) If some one asks where have the Pyu disappeared I would say," I'm here!" It's because the Pyu and Myanmar (Bamar) are the same. I'll give the irrefutable evidence. Today Burma comprising Shan (Tai) in the east, Rakhaing in the west, Mon in the south, Chin and Kachin in the north, Myanmar in the centre has great cities starting with Bagan (Pagan). If we talk about Pagan, we must start with Pyu Saw Hti (Pyusawti), the king of Pyu. Where are those Pyu? They are mixed with Bamar now. But this assimilation is not so long. We see Pyu writings in the Myazedi Inscription in AD 1084 and the latest one in the 16th century. Some people say the Pyu still live in the Yaw region of Magwe Division. Why did this happen?
It's due to the influence of the Bamar. Let's see the defence forces or potential of the Pyu.
Pyu had9forts or fort towns:
(3) Halin (Hanlin)
(5) Maingmaw (Mongmao) near Kume
(6) Htichaingt (Hticheint)
(7) Hmawzar (East Thegone)
(8) East Bhamo (Kanthidar)
(9) Mauria near Mway Yin
Mauria is situated to the west of Irrawaddy River, but its exact situation is not known. Majority of the Pyu lived in Bhamo, Htichaingt, Shwebo District, Kyaukse District, Taungdwingyi areas. These areas are Bamar places and the Pyu have come and lived there since the 1st century AD.
The Pyu places are as follows:
1) Around Kyugoke (Kyu-Gok)
2) Rakhaing (Arakan) Coast (Some places)
3) Around Thabeikkyin
4) West of Irrawaddy River between Katha and Shwegu
5) Around Monywa
6) Near Panlong River and Zawgyi River Confluence
7) Near Salin
8) Htilin area
10) Sittang River basin
11) Around Tagaung
12) Around Toungu
13) Around Pegu
14) Around Mottama (Martaban) and Thaton
The Pyu in the above places married with the incoming Bamar and their children no longer use the Pyu names. It's the reason these Pyu seemed to disappear.
In the foreign relations, the Pyu had relations with India especially Orissa from the estuary of Hugli River to the southern end of Malay Peninsula and all the coastal regions of India, Vietnam, Champa. But the peoples in those foreign lands forget the Pyu and they called Burmese peoples as Shan (Tai), Mon and Bamar (Myanmar) only. I mean the Pyu disappeared by assimilating with the Bamar. In this book I'll pick or take out the Pyu that have lived hidden staying underground. (Dr Than Tun, 12.05.2008)
The Ancient Pyu
The "Further India" was populated mostly by the Indonesian peoples from Annam to Java Islands. Burma at that time was populated by cannibals and also by the tailed hominids, according to Ptolemy. Chinese Records describe the inhabitants of Burma as Piaou, polite ones. The Chinese Records say, "There are established ways of correct relations between king and ministers, father and son, senior and junior in rank," The Piaou wear silk cotton dresses. They use swords and axes made with iron , copper metal, and gold. They use spices and herbs, clove.
The Tang Dynasty Historians called the Piaou as Tu Lou Kyu or Tu Li Chu. They are also known as Ti- Sul or Trit-Cul. These Piaou are Pyu. They live in Halin, Sri Kestra and Beikthano. There are urns with inscriptions of names ending in Vikrama. There are other inscriptions ending with Gupta or Varmans. They show the influence of Indian civilization in the Pyu areas. The Pyu burn the dead and put the ashes in the urn.
The Tang Dynasty records have detailed description of the Pyu culture. The Pyu called the king Maha Raja and the Chief Minister as Mahasena. They have established ways of King Travel. The King has many queens. They would not wear silk for fear of killing the silk worms. They are devout Buddhists. There is evidence of Siva and Vishnu worships in the Pyu cities.
Sri Kestra is the largest city of the Pyu. The Pyu went north when it was destroyed, but the Bamar or Pyu still have great aspects for the city by calling it the City (Pyi).
The Pyu writing was first found in the Myazedi Inscription that has four surfaces, each written in Bamar (Myanmar), Pyu, Pali and Mon respectively. The Pyu are Tibeto-Burman, closely related to the Burman.
The Pyu are dominated by the Nan Chao who sent the Pyu delegation to the Chinese Emperor who liked the Pyu Dances. The Pyu Dance and Music are well recorded by the Tang Dynasty. The Nan Chao destroyed the Pyu City, probably Halin (Later research points to Sri Kestra), in 1832 and ended the Pyu Reign. The Nan Chao took away 3000 Pyu whose remnants may be still seen in China living as destitute fishermen.
(GH Luce. The Ancinet Pyu. JBRS, XXVII, iii, pp 239-253 and BRSFAP, I, 307-322 translated by Dr Than Tun to Burmese, retranslated in gist by Dr Maung Maung Nyo to English.)
The Pyu According to the Burmese Chronicles (Classic Histories)
From the study of the Pyu insciptions it may be inferred that the Pyu language has no consonants and has 8 syllables. It isaTibet-Burman language, close to the Burmese. (Tin in General Linguistics. )
The Pyu has different names. They called themselves Tu Lao Kyu , Chinese called them Piaou. Javans called them Ku Li Chu. The Persian called them Tirsul or Tir Cul. Kyanzittha Palace Inscriptions mentioned them as Tircul. They had been in Burma since the 3rd century AD. A Hanlin Inscription of Pyu indicates the Pyu script resembles the Southern Indian Script.
The Sri Kestra Inscriptions indicate there are two Pyu kings- Harivikrama and Zayachandrawikrama. They are contemporary kings in Sri Kestra. Hariwikrama founded the city. This city is still extant although ruined. It's circular in shape. It has many Pyu pagodas or stupas. The Bawbawgyi Pagoda or Stupa is still visible and it is bell shape. There are many Pyu coins with Hindu symbols. The Buddhist votive tablets are also found. The Pyu have relations with China (Yunnan) and India. The Pala have relations with the Pyu.
The Pyu City That Was Destroyed
It is stated that the Nan Chao destroyed the Pyu City in AD 1832. Professor Luce and older historians thought it was Halin. However, Dr Than Tun now thinks it was Sri Kestra, not Halin. It's because if the Nan Chao had destroyed the city why would the Pyu go north to establish another city nearer to the enemy. In AD 763-764, the Nan-Chao King Ko Lo Peng has overtaken the Upper Irrawaddy Basin or Upper Burma. So the Pyu city destroyed must be Sri Kestra and the Pyu moved north.
As the carbon dating has become available in 1993 I (Dr Than Tun) would like to change the dates concerning Sri Kestra.
(1) That Sri Kestra is established in AD 638 is impossible.
(2) I also do not agree it is established in 1st century AD.
(3) I like to alter the dates of Vikramas too:
(a) Suriavikrama (Regnal years 63-688)
(b) Hirivikrama (r 688-695)
(3) Sihavikrama( 695-718)
The Pyu Foreign Relations
The so-called Pyu coins are found in Sri Kstra, Halin , Shan State, Kayah State, Thailand and Kampuchea. The symbols are Hindi indicating sun, moon, conch, trident, sriwisra, geha etc. These coins are used from 2nd century BC to 14th Century AD. They are now known to be minted by the Cambodian Kings. The Burmese called the old Cambodians Kwan or Gwan.
The Pyu State extends as follows:
East... Chenla (Kampuchea or Cambodia)
South... Bay of Bengal
North...Yung Chan or Pao-Shan
East of Pyu Land.. Dvarawati of Thailand
North East... Nan Chao
East... Khmer (Funan or Cambodia)
North of Funan lies Annam, now Vietnam.. Fanman or Srimar (AD 205-225) once attacked Sri Kestra. King Srimar fought up to Arakan Yoma, Kra Isthmus, governing Suvannabumi. He also attacked Beikthano called Lin Yang by the Chinese.
Beikthano was founded in AD 1st Century by the Pyu who left in AD 3rd Century. Then Mon entered it. In 4th century AD, the Pyu came back and expelled the Mon. When Nan Chao destroyed Sri Kestra the Pyu have already occupied the Irrawaddy Basin and Delta, Pegu, Sittang Valley, Salween Estuary. The King in Sri Kestra City controlled not only the city, but also areas outside it. Sri Kestra had rice fields in it to withstand enemy siege, encirclement and starvation.
The Pyu Inscriptions and Pyu History
The Pyu came to Burma from the north-west of the country. They followed the path of Naga, Thet (Sak) and Kanan (Ganan) after living in South West of Yunnan (Yong Chang). They migrated down along the rivers of N'Mai-kha and Irrawaddy Rivers. They lived near Katha, then, Shwe Bo District and along the Irrawaddy River down to Beikthano and Sri Kestra. In 2nd Century AD Beikthano was destroyed by the Funan or Kwan Army and the Pyu established the Sri Kestra. They spread to the Irrawaddy Delta, Sittang Basin and Pegu River Estuary. That Pyu country may be called the First Union of Burma (United States of Myanmar). Sri Kestra was destroyed in AD 1832.
There are many Pyu inscriptions in Sri Kestra and other Pyu Cities. Seven Pyu kings can be named:
Their dates of birth and ages with AD years can be ascertained starting from AD 78 that is Saka Era.
Harivikram 57 y,2m, 24ddied on 19.07.120 AD (41Calendar Year)
Sihavikrama 80 y, 2m,4d died 20.09.123 AD (44 Calendar Year)
Suriavikrama (Queen) 35 y died on the same date (44 Calendar Year)
Suriavikram (King) 50 y,5m died on 143 AD (64 Calendar Year)
Ditaravikrama died in 163 AD (84 Calendar Year)
There was an overland route from Funan (Cambodia) to Vesali (Rakhaing) through Dvarawati (Thailand), Beikthano (Burma), Sri Kestra (Burma). The Pyu country was therefore surrounded by Funan in the east, East India in the west, Nan Chao in the north and Bay of Bengal in the south.
The Chinese called Beikthano "Ramanna" in the 4th century AD. It grew in strength and conquered all the Tai states in the north and Mon land in the south. It could be called the First Union of Burma before Anawrahta (King Anuruddha).
Duttabaung the Great Pyu King
The great Pyu King Duttabaung is mentioned in many Burmese chronicles. He isahero associated with the occurrence of earth quake, land slide and drying of sea. It's unbelievable. However, the geologists said those events occurred long before he was born. I know now he isagreat Pyu King. The Pyu came to Burma in the 1st century BC and by 1st century AD they have occupied Burma from Halin in the north, Maingmaw or Mongmao and Beikthano in the middle, Sri Kestra in the south. By 4th century AD their population extends from Lashio in the north and Mottama (Martaban) in the south. They are the First Union of Burma builders. But in AD 832 Sri Kestra is destroyed and they intermarried with the new comers Tibeto-Burmans and gradually disappeared. By 12th century the Pyu are not mentioned as slaves in the inscriptions. Now, apart from 60 to 50 Pyu words no body knows how to read the Pyu script. Duttabaung is not the name ofaking, it means just any Pyu king. Now we know that Duttabaung means several Pyu kings.
According to the legend, Duttabaung is born from Mahathamawa of the Tagaung ancestry. Mahathamawa married Bedayi in Sri Kestra and her father Hermit consents the marriage after he knows that Mahathamawa is his nephew. They established Sri Kestra. Mahathawawa dies after some years and his younger brother Culathamawa inherited the throne as well as Queen Bedayi. Hence King Duttabaung is said to be born of two fathers (Maha and Cula Thamawas). His birth is heralded by great events:
(1) A big earth quake with great din occurs.
(2) A lake appears in Pho U Taung area.
(3) Samon and Samyeik Rivers appear.
(4) Mount Popa emerges from the earth.
(5) Sea around Sri Kestra disappears.
The geologists say those events occurred about one million years ago! But, the Pyu lived in Sri kestra and Duttabaung was their king. He is the embodiment of several Pyu kings (7) that govern the Pyu and protect them from enemies. These kings maintain order, preserve Pyu culture, encourage religion, mostly Theravada Buddhism, build pagodas:
(1) Sawkrama Stupa
(2) Nyinyi Stupa
(3) Cici Stupa
(4) Bawbawgyi Stupa
(5) Pahthogyi Stupa.
King Duttabaung travels widely,is very powerful and conquers many insurrections. But he confiscatesareligious land not in use and he becomes blind. He drowns while boardingaship in the Negris Sea. Is it real? It may be to let the later kings know the punishment for trespassing the religious property. Evenaso powerfulaking like Duttabaung dies ingloriously if he confiscates the religious land! It'salesson for all.
In 1993anew stone urn was found. It contains inscriptions and it has the word Duttabaung in Pyu script. But it refers to not one king, but to several Pyu kings:
(1) Devamitra (Lover of Deva or Nats)
(2) Hariwikrama (Disciple of Vishnu)
(3) Sihavikram (Brave as lion king)
(4) Suriavikrama (As powerful as the sun rays)
(5) Triduvikram (Protected by body armour)
(6) Zatravikrama (Winner of whole tribe)
(7) Aditravikrama (As glorious as the sun)
Now, we know their dates of death and Regnal years. The years described in the inscriptions belong to the Saka Year that is less than 79 years from Christian AD years. The Tang Dynasty Records describe 32 Pyu towns. These towns can be located with modern Burmese places:
1. Alisi... Alakappa
5. Swelugtang.. . Yepawmi (Watershed of Yu River)
6. Sophan... Kyapin, west of Yangon
8. Phamaw... Middle of Sittang Basin
9. Lawson-i.san. ..Wantin, Kyugoke
11. Luwu...Dyke- U
13. Mie-chaw... Rakhaing Coast
14. Maw-ti-paw.. . Martaban
17. Paw-law-pho- ti...Palawati
18. Wu-wu-thaw.. . Ahlonpana, Ahlon Monywa
19. Sai-si-ya... Tagaung
21. Shay0ywe...Zeyawadd y, near Taoungo
22. Tamaw...Tayoke, Zawgyi and Panlong rivers Confluence
23. Tan-paw...Tampa, Pagan
24. Taung-pu...Thabeik- kyin
25. Taung-lin-ga. ..Pegu, Mon
26. Ti-so..Didoke, 40 miles north of Yangon
27. Tili-lan=ga. ..Hti Lin
28. Wung Tig
29. Wunkong...Wan- tein, Kyu Goke
30. Ye-pan...Yin- Pyin near Shwe-gu
Previously, we thought the Pyu live along the middle of the Irrawaddy Basin only. Now we know they live between Latitude North 16º30´ and Latitude North 24º, between Longitude East 95º and Longitude East 98º30´, thus occupying the Northern Shan State west of Salween River, Ye-U River in the Yaw Area, down to Mottama (Martaban) in the Tenasserim Division or Mon State.
But there are only9Pyu Forts or Fort Towns;
2. Kan-Wung...Kanthida near Nga O village near Shwe-Li River
3. Mina-tao-li. ..Myingyan
4. Maw-Fu...Mauria (Mywe Yin, west of Irrawaddy River)
5. San-Taw...Halin or Hanlin
6. Ta-li-Moh... Thegone, South east of Hmaw Zar
7. Taung-Lin-Wung. ..Taungdwingyi
8. Ti-Che...Hti Chaingt
9. Tu-mein...Kume, Maing Maw or Mongmao (Conservator of Forest u Aung myint named it after he found it near Kume.)
5 Forts lie north indicating the enemy would come from that direction more than from the south where there is the sea (Bay of Bengal).
There are Pyu coins with many Hindu symbols.: Badra (Stool), Sandr (Moon), Sanche (Conch), Sriwisra (House), Swastika (Cross fan), Visra ( Thunder bolt). They were minted in the 3rd century AD by the Khmer used along the trade route between Kampuchea and East India or Northern Rakhaing.
There are 20 foreign states or places that the Pyu had traded:
1. San Paw.. Champa,
3. Celsius... Kalika,India
4. Ci-ya-law-faw- ti...Kalwunti near Twante
6. Ci-a-thaw... Katana, Kadamb
7. Su-lon... Bali
8. Baw-te...Sri Vijaya, Palabaung
9. Kamarupa... Old Assam
10. Sun-lang... Konyong near Salween River Estuary
12. Mie-Seg... Labisi-ang, Taikala
14. Maw-li...Mali, India
15. Panti... Panne, East India
16. Phaw-li... Bali
17. Shay-phaw Java
18. Shay-way-i.. . Savatti
19. Taw-ku-e.i.. Kra Isthmus
20. Wu-tay... Orissa
These Pyu built the first Union of Burma, but they disappeared by mingling with the Bamar. Duttabong was their great king, but9kings took its honor of Dutta Bonna in the Pyu script beginning with King Harivikrama who died in AD 120.
Dr Than Tun states in this book that the Pyu and the Burman or Bamar are the same. The Pyu asatribe disappear by intermarriage with the Burman and by discarding the use of the Pyu names. The Pyu naming system is cumbersome as the last word of the father becomes the first word of the children like Pyu Saw Hti (Pyu-sao-ti) :
1. Pyu Saw Hti
2. Hti Min Yin
3. Yin Min Pike
4. Pike Theli
5. Theli Kyaung
6. Kyaung Du Yit
This system is stilled followed by the Pyu relatives in the China-Burma border such as by the Lolo and other Tibeto-Burman tribes. This system may be applied as in Daw Aung San Suu Kyi's name as her father's name is Aung San.
Besides, the Pyu formed one subgroup of the Tibeto-Burman Tribes that entered and occupied Burma since the beginning of the Christian era. These Pyu gave rise to the present Bamar by intermarriage with the later Tibeto-Burman including the Burman. So. the Bamar are the Pyu and the Pyu are the Bamar, we can say. This is my layman's interpretation. I'm notahistorian. Geneticists may confirm this racial integartion by DNA testing of the Pyu and Burman (Bamar).
Dr Maung Maung Nyo
အမ.. စာကောင်းပေမွန်များ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ...
အတ္တဟိတ ပရဟိတမျှတာစွာဖြင့် မိမိသူတစ်ပါး အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အကျိုးပြုသွားနိုင်ပါစေ....
မမရေ .. တက်ထားပါတယ်နော် .. အဆင်ပြေရင် ရေးပေးပါဦး ..
9:29 PM PDT
အစ်မရေ အကြွေးကျန်းတွေစုပြီး ဇိမ်းနဲ ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျမလုံးဝမအားဘူး အစ်မေ၇ လုံးပါးပါနေတဲ့ဘ၀ထဲ အသက်၇ှင်၇တာ ကိုက အပြစ်လိုဖြစ်နေတာလေ။ နား၇က်ကို စုပြီးပေးတော့လည်း စာတွေကို စုပြီး ဖတ်ခွင်ိ့တော့၇သွားတယ်အစ်မ၇ယ် ။ အဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့လာဖတ်ဖြစ်တယ်အစ်မ
3:09 AM PDT
အမပျိုးတဲ့ပန်းခင်းရဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေမှုဟာ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ မြင်သာပါတယ်။
လောကရဲ့ဓမ္မတာအရကိုက အပြုသဘောရှိရင် အဖျက်သဘောရှိမယ် ချစ်သူရှိမယ် မုန်းသူရှိမယ်။
သဘာဝတရားပေါ့နော်။ ရေကိုတောင်မှအခါခါအထပ်ထပ် စစ်ပင်စစ်ညားသော်မှ ရေကဖြစ်တဲ့ပိုးနဲ့အိုးကဖြစ်တဲ့အနှယ်နဲ့ အနည်းနဲ့အများတော့ နောက်ကြိမှုတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောရရင်
ကျနော့မှာတော့နည်းကောင်းတခုရှိပါတယ်။ ကျနော့်နည်းကတကိုယ်ကောင်းဆန်စွာနေခြင်းပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကောင်းအောင်ဘဲနေတယ် လုပ်တယ်။ သူဘယ်လောက်မကောင်းသော်လဲ အလေးကိုမမှုဘူး ကိုယ်ကောင်းတာလုပ်ပေးလိုက်လို့
အဲဒီလိုတကိုယ်ကောင်းဆန်နေခဲ့လိုက်တာ ဒေါသမဖြစ်ဖြစ်တော့တာများလာတယ်အမရေ ရွင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။..a
အမရေ.. မရောက်တာကြာသွားတယ်ဗျာ..ခရီးသွားနေလို့.. အသေချာကို ဖတ်သွားပါတယ်.. အောက်က သီချင်းလေးကိုလည်း ယူသွားပါတယ်.. ဟုတ်တယ်နော်..ကမ္ဘာကြီးမှာ ရောဂါတွေ မျိုးစုံပဲ.. ဒါတွေကို ကုစားရမှာပေါ့နော်...
ထွက်သွားပြန်ပြီ အဟင့် :((
နီနီ လေးဖြူလို အော်လိုက်ချင်တယ်" ပြန်လာပါတော့"
အမရေ ဖတ်လို့ကို မ၀နိုင်ဘူး ဗဟုသုတရော ရသပါ ပေးနိုင်စွမ်းတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ အမရေ။
အရမ်းနောက် ကျပြီးမှရောက် လာ ရ တာ ကိုတော့ ခွင့် လွတ် ပေး ပါ မသက် ဇင်..
ကံဇတ်ဆရာ အလို ကျ ကနေရတဲ့ ဇတ် ရုပ်တွေ က အခု တလော များ နေတာ ကို
အခု တင်တဲ့ ပိုစ့် လေးတွေ မှာ ပါတဲ့ သုံသပ် ချက် တွေ က ပိုပြီး ဘက် လိုက်မှု ကင်း လညာတာ ကို သမိုင်း ကို အနည်း ငယ် မျှလေ့ လာ ဘူး သူ တယောက် အနေနဲ့ ပြော ခဲ့ ပါ ရစေ။
လေးစားစွာ ဖြင့် ဥပသကာ
ခေတ် နောက်ကျတဲ့ တောင်တန်းဒေသတွေမှာ အကြီး အ ကဲ တစ်ဦးသေဆုံးတာနဲ့ သားမယားတွေ ၊ ကျေး ကျွန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မြှုပ် နှံကြတဲ့ ရှေး ဟောင်း ဓလေ့တွေကို ပိတ်ပင်ပြီး
အဲလိုမျိုး လုပ်တာ အိန္ဒိယမှာ ရှေးတုံးက မဟာရာဂျာ
တွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားဘူးတယ်
အရှင်လတ်လတ် အသတ်ခံရတဲ့ ကျွန်တွေသနားစရာပါ။
ဖတ်ရတာ တနင့် တပိုး ဗဟုသုတတွေ ရတယ် အစ်မ ။ အများကြီး စုဆောင်းထားတာပဲ ။ လေးစားအားကျမိပါတယ် ။ အားပေးနေပါတယ် ။
အမရေ .. အမရဲ့စာတွေကို ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ တိုးစေတယ်ဗျာ .. ဒီဝတ္တု အဆုံးသတ်ကိုရောက်သွားရင် အကုန်လုံးကို စာအုပ်ပြန်ချုပ်ထားသင့်တယ် .. ဒီလို ၀တ္တုမျိုးကို ရေးတဲ့လူ ရှားတယ်လေ
အလုပ်များနေတယ်ထင်တယ် ..း)
ဗညားရှိန်က အမကိုတဂ်ချင်လို့တဲ့ ..း)
အားမှရေးပေးလိုက်အမ .. မအားရင်လှည့်ကိုမကြည့်နဲ့ သိလားး)
မြေးမလေးက မျက်လုံးချင်းဆုံတော့ အပြုံးလေးတွေတောင် လမ်းခုလတ်မှာ ခလုပ်တိုက်သွားပြီ...ဆိုရင်......
ခက်တာက လိပ်ပြာလေးက “မ” ဆံပင်ထဲတိုးဝင်သွား တယ်လို့ ကဗျာဆိုရအောင်.....
လေအပင့်မှာ ကြွေလွင့်ခဲ့ နှင်းဆီကို
ခိုဝင်သည် “မ” ဆံနွယ်ကြား
2:10 AM PDT
လာလည်တယ်နော် အမသက်ဇင်ရေ ..နှစ်သစ်မှာရွင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ....ကိုထိုက်
တွေ့ချင် မြင်ချင်မိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ (၁၀) ဦး ထဲ ထည့်ထားတယ်နော် ..အမ :) ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ..
တီတီဇင်ရေ..... အခုမှပဲ အပိုင်း၁၂ကိုလာဖတ်ဖြစ်တယ် တီရေ.... တီတီဇင်နေကောင်လား........ မတွေ့တာ ကြာလို့.....
မရောက်တာကြာလို့တောင် စာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပြီ
အပိုင်း ၁၂ ကိုဖတ်သွားပါတယ်
မြေခွေး ၏ စပြစ်သီးချဉ်
မိန်းမလှ့့့ 
သင်ဟာ စင်ပေါ်က ပါလေ။
3:24 PM PDT
သမိုင်းကိုချစ်တတ်ဖို့ သမိုင်းဆိုတာကိုသိအုံးမှကိုး။ မသိတဲ့လူတွေများနေပြီဗျ။ ဒီမှာစုမှာ သိစရာတွေများတယ်။
လာလည်တယ် အစ်မကြီးရေ ... ဘယ်မှ မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဗျာ ...
5:59 AM PDT
ပြန်ရောက် လာ ပြန်တယ် လေ..ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုသာ တမ်းတတတ်သော မသက်ဇင် ရေ
အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်၊ အခုမှဘဲ URL ဖြောက်လို့ရသွားတယ်
တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ အရင်တုံးက ကိုယ့်ဘလော့ဂ် blogspot.com ကြီးက ပြူးနေတာဘဲ၊ ကျွန်တော်က မောင်မောင် လေးဘဲ ပေါ်ချင်တာ
ဟံသာဝတီ နန်းတော်ကြီးကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ ပုန်ကန်ထကြွမှုကို မြန်မာ ရာဇ၀င် တွေမှာ အတိ အလင်း ဖွင့်ဟ ၀န်ခံ ထားတယ်။
ရောက်ပါတယ် အမရေ.... ငြိမ်နေတယ်နော်.. အသစ်လာတော့မယ်လား... မျှော်နေပါတယ်...
အမသက်ဇင်ရေ ကျနော်ချစ်သူက သမိုင်းအကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားလို့ အမရဲ့ဘလော့လိပ်စာလေးကိုပေးလိုက်တယ်..စာတွေ
အစ်မရေ အလည်ရောက်တယ်--သမိုင်းးအကြောင်းတွေ ဖတ်သွားတယ်
ပြည့်စုံနေပါတယ်နော် ... :)
မသက်ဇင်ရေ... ပျောက်လှချည်လား။ အမမြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ အမရဲ့  ပျားရည်တစ်စက်ကို ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြပြီလေ။ နိုးထပါတော့။
ပုံရယ် ဘေးတစ်ဝက်စောင်းပုံရယ် ဘေးစောင်းပုံရယ် အဲ့လိုမျိုးသုံးပုံလောက်ပို့ပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျ..ရယ်နေတဲ့
အေးဗျာ၊ ကျနော်ရောက်ဖြစ်တာ ဒါပထမဆုံးပဲ။ ပုဂံအကြောင်း တစ်ပုဒ်လောက်ဖတ်ပြီးတော့ ပုဂံအကြောင်းအတော်သိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ထားတဲ့ကျနော့်ခမျှာ အတော့်ကို အားငယ်သွားမိတယ်။ အမအရေးအသားတွေကောင်းသလို အချက်အလက်တွေကိုလဲ ရှာဖွေတင်ပြထားတဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေအတွက် အများကြီးသုတပွါးရပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်တော့ မပြောနဲ့တော့ အရင်က သိဖူးတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ပုဂံအသိဟာ မှန်းနန်းရာဇ၀င်ထဲပြန်ဝင်ပြေးသွားပြီး။ ဒီရှေ့တော့ အမရဲ့ ရာဇ၀င်အသစ်ကိုပဲ စောင့်ဖတ်တော့မယ်။ ကျိုးပန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ အမ။
ရိုးရိုးစာပေနဲ့ ကွာခြားတာက ဘလော့ဂင်ခြင်းမှာ စာကိုသာမက စာရေးသူကိုပါမြင်နေရသတဲ့။ ဒါကြောင့် စာကောင်းဖို့တင်မက လူကောင်းဖို့ပါ လိုတယ်။ စာထဲရေးနဲ့တင်မလုံလောက် လက်တွေ့နဲ့ပါ ရေးပြရလိမ့်မယ်။
လူကောင်းတွေရေးတဲ့ စာညံ့ညံ့လေးတွေဖတ်ရတာဟာ လူဆိုးတွေရေးတဲ့ စာပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် တွေဖတ်ရတာထက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူကောင်း စာလည်းကောင်းတဲ့ အစ်မရဲ့
အသစ်အသစ်တွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်တို့ အသစ်အသစ်တွေကို စောင့်နေပါတယ်။
2:51 AM PDT
စာလာဖတ်ပါတယ် အစ်မ အပိုင်း (၁၃) စောင့်နေပါတယ် ကျွန်မရဲ့ စိတ်ရူးပေါက် စာတွေကို အားပေးလို့လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မသက်ဇင် ကျနော် ဒုတိယအကြိမ်အလည်လာကြောင်းပါ။
အသစ်တင်သေးဘူးလား အစ်မတော်၊ မတွေ.တာကြာပြီနော် ကျွန်တော်လည်း ရုံးပိတ်မှ သုံးဖြစ်တာလေ။
1:21 AM PDT
4:05 AM PDT
အမရေ မတွေ့တာ ကြာပီ နေကောင်းလားဗျ
စီဘောက်မှရှိတော့ ဒီမှာပဲ ပြောခဲ့တား)
အရေးအသား အလွန်ပဲ ကောင်းပါတယ် မသက်ဇင်.. ဒီကနေ ဖတ်ရတာ ကြည့်ရတာ ဟာ စိတ်သွားတိုင်း 'ကွန်'မပါတော့ ခက်နေပါတယ်... ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေ မသက်ဇင်...
အမရေ စာတွေလာဖတ်ဖြစ်တယ်...သမိုင်းနဲ့ လက်ရှိဘ၀ ကို တလှည့်စီရေးသွားပေမယ့် အရေးအသားကောင်းတော့ ဖတ်ရတာကောင်းတယ်..
အဖိုးတန်လှတဲ့ သမိုင်းစာပေတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေးနိုင်ပါစေ...။
ဆီဗုံးက လုံးဝပြန်မတတ်တော့ဘူးလားမမရေ... ဒါနဲ့ အပေါ်က တစ်ယောက်မေးထဲကဟာရော မမဘယ်လိုထင်လဲ နေ့အိပ်မက်က ပျူနဲ့မြန်မာအတူတူပဲဆိုတာ လုံးဝလက်ခံထားတယ်... မမရော.. အားရင် အဲဒါလေးရေးပါဦးနော်...
လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာဇဝင်တွေအရ ပျူနဲ့မြန်မာ သွေးရော သွားပြီးပျူလူမျိုးကပျောက်ကွယ်သွား
တယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်များက ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
( ၁ ) သဘာဝ အရိုင်းသက်သက် မျှသာ ရှိသေး သည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်း သို့ပထမဦးဆုံး တိုးဝှေ့ ဝင်ရောက် လာ သည် မှာ အနောက်တိဗက်အ နွယ်ဝင်ပျူ လူမျိူးများဖြစ်သည်။ ပျူ နှင့် အနွယ်တူ ရှေးဟောင်းလူမျိုး များ သည် အိန္ဒိယ ပြည် အရှေ့ ဘက် ဒေသ များ မှ အစုစု ကွဲကာ ဧရာ တီမြစ်ဝှမ်း ဒေသတ၀ိုက် သို့ ပြန့် နှံ့သွား ကြဟန်ရှိသည်။ ရ ခိုင်ကမ်း ရိုးတန်းဒေသသို့ လည်း ၀င်ရောက်သွားကြ သည် ဟု ယူဆ ရသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဒေသ တ၀ိုက် တွင် ပျူ လူမျိုး များ နှင့် သက်ဆိုင် သည့် ရှေးဟောင်းမြို့ ပျက် များ ၊ အသုံးအဆောင် များ အားရှာ ဖွေတူးဖေါ် တွေ့ ရှိ ချက် အရ ရှေးဟောင်း ပျူ လူမျိုးများ သည် မြန်မာ နိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ရွှေဘို ။ မုံရွာ အလောင်း တော် ကဿဖ ဖိုးဝင်း တောင် ၊ ဟန်လင်းကြီး ၊ တကောင်း ၊ မြင်းခြံ ၊ ပုဂံ ၊ ပုပ္ပား ၊ မကွေး ၊ မင်းဘူး ၊ သရက် ၊တောင် တွင်းကြီး ရမည်းသင်း ၊ ညောင်လွန် ၊ ပြည် ၊ မှော်ဇာနယ်များ တွင် မြို့ ပြပြည်ရွာ များ ထူထောင် ခဲ့ကြ သည် ဟု အထောက် အထား အခိုင်အမာ တွေ့ ရှိရသည်။
( ၂ ) ပျူ လူ မျိုးများ နှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းဝင် တရုတ် စာပေ ထန် ရာဇ၀င်ဟောင်း များမှ ကောက် နုတ် ဖေါ်ပြ ရလျှင် ပျူ လူမျိုး များ အား ၄ ရာစုလောက် က ပင် များစွာ တိုးတက် ယဉ်ကျေးသည့် လူမျိုး တမျိုး ဖြစ်ပြီး ၈ ရာစု လောက် တွင် ကြီးကျယ် ခန်းနား အံ့သြဖွယ် ရာ မြို့ ကြီး ၅ မြို့နှင့် ပြည်နယ် ကလေး ပေါင်း ၁၈ နယ်မျှရှိ ကြောင်း ဘုရင်မင်း ၏ အမည်ကား မဟာရာဇာ တည်း ။ အမတ်ချုပ် အမည် က မဟာ သေန တည်း။ မင်းကြီး မဟာရာဇာ သည် ခရီးတိုသွား သည့် အခါ ရွှေကြိုးခတ် သည့် ထမ်းစင်စီးပြီး ။ ခရီးရှည်သွား လျှင် ဆင် စီး သည်။ မိဖုရားမောင်းမတရာကျော်ရှိသည်၊ မြို့ တော်တံတိုင်းဝန်းကျင်အားစဉ့်အုတ်နှင့်စီထားသည်။
( ၃ )အာရှ တိုက် ဆိုင်ရာ ဘာသာဝေါ ဟာရ ပညာရှင် များ က မြန်မာလူမျိုး များသည် အရှေ့တိဗက် ဘာသာ ဝေါ ဟာရ အုပ်စု ၀င်လူမျိုး တမျိုးဖြစ် သည် ဟု အတည်ပြုထားကြသည်။ တရုတ် မှတ်တမ်းဟောင်း များ ၏ အဆို အရ မြန်မာလူမျိုးများ သည် တရုတ်ပြည် အနောက် မြောက် ကန်ဆူ နယ် တွင် နေထိုင်ကြသည်။ တ ရုတ် က ဖိသဖြင့် တိဗက် ကုန်းမြင့် ဒေသ တ၀ိုက် သို့ ပြောင်းသွားကြသည်။
တိဗက်တို့က မောင်းထုတ် သဖြင့် ယူနန်နယ် သို့ ပြောင်းကြ သည်။ ထို အချိန် တွင် ယူနန် နယ် တွင် အင်အား ကြီးမား လာသည့် ထိုင်းရှမ်းများသည်ပြည်နယ်ကြီး ၆ ခုကို နန်ချို နိုင်ငံ အဖြစ် ပထမဆုံး သိမ်းသွင်း နေသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုး များသည် ယူနန်နယ် တွင် နန်ချို ထိုင်း ရှမ်း များ နှင့် နှစ် အတန်ကြာ နေ ထိုင် လာ ခဲ့ကြ သည် ဟု ယူ ဆ ရ သည်။ တရုတ် ရာဇ၀င် ဆရာ ကြီး ဖန်ချုံ ၏ မှတ် တမ်း ၌ ငှင်းတို့ ၏ အကြီး အကဲ အား မင်း ဟု ခေါ် ဝေါ် ကြောင်း ထိုင်း ရှမ်း များ က စောမင်း ဟု ခေါ် ဝေါ် ကြောင်း ရေးသား ထား သည် ယင်း သို့ နန်ချို ထိုင်း ရှမ်း များ ၏ လက် အောက် တွင် နေ ထိုင် ရာမှ ထိုင်းရှမ်း တို့ ၏ ဖိနှိပ်မှု အား မခံနိုင် သ ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း သို့ ဝင် ရောက်လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း နှင့် ပတ်သက် ၍ အကြား အမြင်များ သည့်
သမိုင်းဆရာ ဂေါ်ဒွင်လုစ်၏ အဆိုအရ မြန်မာများသည် ရှေးဦး စွာ ကျောက်ဆည်နယ် သို့ ဝင် ရောက် လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း သို့ ပြန့် နှံ့သွားသည် ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာတို့ ရာစုနှစ် အ နည်းငယ် အတွင်း အခြေ စိုက် နိုင်ခြင်း မှာ မြန်မာ တို့ ၏ အစွန်း အစ အပြင် ထို အချိန်ကာလ တွင် နန်ချို ထိုင်းရှမ်း တို့ ၏ တိုက် ခိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း ကို ခံလိုက်ရပြီး ၊ တိုင်းပျက်ပြည်ပျက် နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပျက်သုဉ်းယုံသာ မကကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း များပါ ပျက် ပြားပြီး ရပ်တည်ရာ မရ ကစင့် ကလျား ဖြစ်နေသည့် ပျူ လူမျိုး များ နှင့် ရော ထွေး နေ ထိုင်ရာ မှ ရာစုနှစ် အနည်းငယ် ခန့် အတွင်း ပျူ လူမျိုး များ နှင့် သွေးရောနှော သွားကြပြီး လူမျိုး ကြီး နှစ်မျိုး ပေါင်း စပ် လိုက်ကြသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ကာကွယ်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စသည် ဖြင့် အစစ အရာရာ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးလာပြီး ကိုးရာစု နှင့် ဆယ်ရာစုခန့် လောက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ အား စည်းလုံးသိမ်းသွင်းပြီး ပုဂံပြည် နှင့် ပုဂံမင်းဆက် ကို စတင် တည် ထောင်လေသည်။
ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ ပျူတွေဘယ်ပျောက်သွားသလဲ
ဖန်ချုံ ( တရုတ်ရာဇဝင်ဆရာကြီး )
လာလည်ပါတယ် မ...knowledge တွေကတော့ များလှပါဘိ...ပျော်ရွှင်ပါစေ..
အချိန်နည်းနည်းရလို့ စာတွေ အေးအေးဆေးဆေးလာဖတ်တာ..
မအားတဲ့ကြားက လာလည်တာ ကျေးဇူးပါပဲ အမရေ ။ နေကောင်းတယ်နော်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။ အမ ။
ပို့စ် ရော ကော်မန့်တွေပါ ဖတ်ရတာ အားပါးတရရှိလှတယ် ၊၊ ပြောစရာမလိုအောင် ပြည့်စုံပါတယ် ၊၊ အမြဲသတိတရ ခင်ခင်မင်မင်ရှိပါတယ် (မ)သက်ဇင် ၊၊ နေကောင်းကျန်းမာပါစေ၊၊
မင်္ဂလာပါ အမ ...
အမရေးလိုက်တဲ့ Comments တွေက ရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် moderation လုပ်ပေးလိုက်မှ ပေါ်လာတာ။ ရေးပြီးပြီးချင်း မပေါ်ဘူးလေ။ ဟိုတနေ့က ကလိပြီး Comment moderation ကို သွားပေးထားမိလို့ပါ။ အခုတော့ ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ အမရေ။ လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ် ဟုတ်။
တစ်ဖြည်းဖြည်း စိတ်ဝင်စားမှုပို လာပြီ အမရေ.. အားပေးလျက်ပါ
shae myanmar said...
ထီးလိုင်မင်း ( အများအခေါ် ကျန်စစ်သား ) ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ရွှေစည်းခုံကျောက်စာ မှာ ရေးထားတဲ့
၁၁ ရာစုမြန်မာတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ကို ကူးချလိုက်ပါတယ်။
မင်းသည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုရှိ ခြင်း ( ၁၈ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
မကောင်းသောစရိုက်တို့ကို သုတ်သင်ပစ်ခြင်း ( ၁၉ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
ပြည်တွင်း ပြည်ပရန်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ( ၁၉ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ခြင်း ( ၂၀ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
အစားအစာ အဝတ်တန်ဆာတို့ကို စွန့်ခြင်း ( ၂၁ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်း ( ၂၃ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
ဗုဒ္ဓသာသနာကို စည်ပင်ထွန်းကားစေခြင်း ( ၂၄ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
နိုင်ငံတွင်း၌ ခိုးသား ဒမြ မရှိ ၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာ လျက် နိုင်ငံတော်ကျယ်ဝန်းသည် ( ၂၅ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
ပျက်စီးလေပြီးသော မြို့ရွာတို့ကိုလည်း ရှေးယခင်ကထက် ကောင်းမွန် သာယာစည်ပင်အောင် ပြုစုပေး ( ၂၇ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
တင့်တယ်သော ကျက်သရေရှိသော အရိမဒ္ဒနပြည်၌ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခြင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှကင်းသော အုပ်စိုးနည်း ကို အရှင် ဂြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇာမင်း (ထီးလှိုင်မင်း) သည်သွင်သင်ဆုံးမ ပြသလတံ္တ ။
( ၂၉ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်း )
ဆိုလိုတာက အုပ်ချူပ်တဲ့အစိုးရကို ကြောက်ရွံ့ နေရတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး ဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှားပြခဲ့တာပါ။
ရည်ညွန်း။ ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း " မြန်မာ့သမိုင်းလစ်ကွက်များ "
ရောက်လာပါတယ် မရောက်တာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီ။ အခန်းဆက်တွေကို တဝကြီးဖတ်သွားတယ်။ မသိသေးတာတွေလည်းသိရတာမို့ နှစ်သက်မိပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင် စာအုပ်လုပ်ထားတာကောင်းမယ်လို့ထင်မိတယ်...
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ရအောင် အကုန် copy ကူးသွားပါတယ်
တီတီဇင့်ကို စိတ်စွဲပြီး အိပ်မက်တောင် မက်တယ်..း(
စီဘုံးမရှိလို့ လာနှုတ်မဆက်ဖြစ်တာပါ အစ်မရေ..
အခု ကွန်မန့်ရေးဘို့တောင် လေးနေပြီး အကြာကြီး
စောင့်ဖွင့်မှ မန့်လို့ရတယ် မမရေ...
စာလာဖတ်ရင်း နှုတ်ဆက်သွားပါတယ် မမရေ.
၀ါဝါလည်း နေမကောင်းနေတာ မမရေ.. ဒီနေ့မှ သက်သာလာတာလေ...
အမက.. သမီးရဲ့ ဘလောဂ့်အဟောင်းကို ရောက်ရောက်သွားတယ်နော်.. နောက်တစ်ခါ www.cuttiepinkgold.info ကို လာခဲ့ပါ မမရေ :D
3:45 AM PDT
စောင့်မျှော်နေကြတယ်။ မြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ အမ။ အားပေးသူတွေ ပြည့်နေပြီ။ နဲနဲလက်ကလေး လှုပ်လိုက်ပါဦး။
ိအလည်ထပ်ရောက်ပါတယ် မသက်ဇင် .. ကျေးဇူးပြု၍ လင့်ကို http://www.drwinthein.info လို့ ပြင်ပေးစေလိုပါတယ် .. ကျေးဇူးပါ မသက်ဇင် .. အစဉ်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
12:56 AM PDT
အမရေ စာတွေလာဖတ်သွားပါတယ် မမကတော်တော်ကိုရေးနိုင်တာပဲနော် အများကြီးပဲ မောင်လေးတောင်တော်တော် ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျ ဗဟုသုတွေကလည်းစုံလင်ပ
အမရေ မလာတာကြာပီနော် ဘယ်တွေပျောက်နေလဲ နေကောင်းပါစ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မသက်ဇင်... အသစ်ဖတ်ဖို့ မျှော်နေပါတယ်..
အမရေ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သမိုင်းအကြောင်း စာကြညာ့်တိုက်မှာသွားရှာစရာလိုဘူး အမဆီလာရင်ရပြီ
nainai14 ပရိုဖိုင်းက မရှိတော့ လည်လို့မရဘူးလေ
4:03 AM PDT